SOMALITALK.COM: Safaaraddii Soomaaliya ee Kenya oo la iibsadey
SOMALIA: SAFAARAD LA DHACAY
SomaliTalk.com | November 15, 2010
Waxaa SomaliTalk.com heshay nuqullo kamid ah dukumiinti la xiriira iibsigii guriga Safaaradda Soomaaliya ku leedahay dalka Kenya, dukumiintigaas oo aad ka daalacan kartid halkan Download(pdf) ama HALKAN (magazine) waxaa ka mid ah:
Dukumiinti muujinaya taariikhdii dhulka uu ku yaal guriga Safaarada Soomaaliya, taariikhdaas oo ka soo bilaabanaysa 1930. Waxana dhulkaas la kala iibsadey 6 jeer ka hor intii aan Dawladda Soomaaliya iibsan 12/4/1973, oo xilligaas ku iibsatey Ksh550,000. Waxa kale oo dukumiintigaas ku qoran in 16/8/1994 laga iibiyey Suleiman Rahemtulla Omar iyo xaaskiisa Zarina Suleiman Omar.
Dukumiinti muujinaya in uu qoray Saadha Mohammed Gulleid oo katirsanaa wadashaqaynta Wasaaradada Arrimaha Dibadda Soomaaliya, taas oo ay ku qoran tahay in Safiirka Soomaaliya ay Dawladda Soomaaliyeed u ogolaatay in uu guriga iibiyo - Waxaa layaab leh in dhanka hoose ee warqaddaas lagu qoray far Qalin ah oo lagu sheegayo in iibinta safaarada la ansixiyey 19 March 1990.
Dukumiintigaas waxaa kale oo kamid ah warqad ku taariikhaysan 19 Mar 1990 taas oo ku qoran AfSoomaali oo ku socota safiirka Soomaaliya, waxaana warqaddaasi ku bilaabatay sidan : "Dawladda Soomaaliya waxay ku fareysaa in aad iibiso guriga Deganka ee Danjiraha dapka Soomaaliyeed ee dapka Soomaaliyeed ee Nairobi, No. LR/1870/111/50..." (FG. AfSoomaaligaas khaladan ayagaa ku qoray..) Waxaana warqaddaas ku saxiixan in uu Tasdiiqiyey Safiirkii Jamhuuriyadda Soomaaliya Ahmed Sheikh Mohamud. Waxaana iibka sabab looga dhigay si loo xallinayo dhibaatooyinka mushaharka shaqaalaha jooga Kenya... FG. Waxaa warqaddu ku taariikhaysan tahay 19 Mar 1990, waa ka hor intii aan xukuumaddii Soomaaliya dhicin.
Dukumiintiga waxaa ka mid ah warqaddii uu February 1995 qoray Wasiirkii Arrimaha Dibadda Kenya (Musyoka) oo uu ku sheegay in dublomaasiyad xiriir ah uusan ka dhaxay Soomaaliya iyo Kenya, maadaama ay dhacday Dawladdii Soomaaliya, sidaas daraadeedna shaqalaha Safaarada Soomaaliya aysan u aqoonsanayn dublomaasiyiin.
Waxaa kale oo dukumiintiga ka mid ah warbixin muujinaysa qiimayn february 2006 lagu sameeyey dhulka uu ku fadhiyo dhismahaasi, qiimayntaas oo ah 130 million oo Kenya shillin ah.
Dukumiintiga waxa kale oo kamid ah dacwad ka dhan ah iibkaas oo ay maxkamadda geeyeen laba dublomaasi Soomaaliyeed oo ah Musa Hersi Fahiye iyo Mohamed Omar ayagoo maxkmada la fuulay lammaanaha iibsadey guriga, waxayna maxkamadda hortageen May-June 1995 ayagoo doonayey in guriga loo soo celiyo Soomaaliya.
Mohamed Omar waxa uu ahaan jirey safiirka Soomaaliya u fadhiyey dalka Jabuuti, waxana uu geeriyoodey dhawr bilood kabacdi markii uu hortegey Maxkamadda Kenya si uu ugu doodo Soomaaliya in loo soo celiyo dhismahaas - haddaba ugu yaraan 10 million oo Soomaali ah ee hadda nool waxaa la gudboon in ay xaqiijiyaan ficilkii uu halgamaagaasi ku doonayey inuu dhismahaas usoo celiyo Soomaalida, maadaama asagii uusan xilligan ummadda u doodi karin oo Allah oofsaday - Allah ha u naxariisto.
Dukumiintiga ka eeg HALKAN (magazine) ama halkan Download(pdf)
Maxkamadda Kenya oo Go'aan ka gaari doonta Dhismaha Safaaradda: December 7, 2010
Maxkamadda Sare ee Kenya ayaa sheegtay in ay December 7, 2010 go'aan ka gaari doonto arrinta muranka dhalisay ee ku saabsan safaaradda Soomaaliya ee la iibsaday. Dhismahaas oo laga dhacay shacabka Soomaaliyeed intii ka dambaysay burburkii dawladdii Soomaaliyeed.
Dacwaddaas waxaa maxkamadda Kenya geeyey dublomaasiyiin Soomaaliyeed oo dalbaday in arrintaas iibka ay Maxkamaddu ka dhigto waxba kama jiraan isla markaasna gurigaas iyo dhulka uu ku fadhiyo loo soo celiyo Soomaaliya.
Guriga sida dukumiintiga sare muujinayo waxaa lacag gaaraysa KSH 15 million ku iibsadey ganacsade reer Kenya ah Suleiman Rahemtulla Omar iyo xaaskiisa Zarina Sulieman Omar waxayna kaga iibsadeen safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyey Kenya Ahmed Sheikh Mohamud.
"Guriga oo ku yaal xaafada qaaliga ah Spring Valley, kuna beegay isgoyska Brookside Drive iyo Lower Kabete Road ee Nairobi, waxaa hadda lagu qiimeeyey Sh500 million," sidaas waxaa dhowaan qortay Jariidada EastAfrica. Waxaana jariidadu intaas ku dartay "Suleiman Rahemtulla Omar iyo xaaskiisa Zarina Suleiman Omar waxay ogaan doonaan in gurigii ay ku iibsadeen KSH15 million in loo celiyo Dawladda Federaalka Kumeelgaarka ee Soomaaliya." Waxaa halkaas ku haboon in lagu daro waxay shacabka Soomaaliyeedna doonayaan in dhismahaas loo soo celiyo, lana xaqiiyo dacwaddii ay fureen labada muwaadin ee Soomaaliyeed Musa Hersi Fahiye iyo Mohamed Omar.
Dowlad Safaarad La'aan ah iyo Shacab dulman!.
Safaaradii Soomaalida ee dalka Kenya waxaa iibsaday danjiriihii dalka Soomaaliya u fadhiyay ee xilka loo dhiibey ka hor inta aysan bur-burin dowladdii Soomaaliya wixii intaas ka danbeeyayne dalka Soomaaliya kama jirin wax dowlad dhexe ah sida aan Qormooyinkii hore aan ku soo xusay.
Intii u dhaxeesay sanadkii 1991-2004 dalka Soomaaliya wax danjire ah uma joogin dalka Kenya, balse dowladii KMG ee uu Madaxwaynaha ka ahaa C/laahi Yusufu isla markaana uu R/wasaare ka ahaa Cali Mohamed Geedi laguna soo dhisay dalka Kenya ayaa Danjire Mohamed Ali Ameeriko u soo magacoowday in uu Danjiraha Soomaaliya ee dalka Kenya noqodo, iyadoo sannadkii 2007 uu Madaxwaynaha dalka Kenya warqada ogolaanshaha u gudbiyay sidaasna uu ku noqday Danjiraha rasmiga ah ee dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya ilaa xilligana isaga ayaa danjire ka ah halkaas.
Dhamaan dowladii KMG ee dalka Soomaaliya soo maray tan iyo sanadkii 2000 wixii ka danbeeyay laguna daray dowladda FKMG ee uu Madaxwaynaha ka yahay Shariif Sheekh Axmed dalka Kenya waa u muhiim sababtuna waa Kenya oo xarun u ah Dowlado, Heyado sida UN-ka iyo Ururo daneeya arrimaha Soomaaliya sidaas darteed Safarka ay Masuuliyiinta Soomaalida ku tagaan dalka Kenya wuu ka badanyahay safarka ay dalka Gudihiisa ku tagaan.!
Dhulka la iibsaday ee Safaaradii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya dacwadiisa waxa ay ka socotaa Maxkadama sare ee dalka Kenya balse sida dacwada u socoto iyo sida ay Dowladda Soomaalida aysan diyaar ugu aheyn in aan dhulkaas gacanta soomaalida lagu soo celin waxaad is leedahay miyaysan Soomaalidu dowlad laheen mise dadkan madaxda sheeganaya waa dad aanba aqoon micnaha ay leedahay arrintan.?
Ugu yaraan labo mar ayaan tagay Maxkamadda ay dacwada ka socoto balse nasiib daro ma arag dad xil iska saaraya in dhulkaas la soo celiyo marka laga reebo Danjire Mohamed Ali Ameeriko iyo Qunsulka Safaaradda Soomaalida Mudane Edson oo xooga muujinaya dadaal aan u muuqan in uu meel dheer gaari karo.
Dalka Kenya waxaa dagan ama ku nool Qaxootiga ugu badan ee Soomaali ah isla markaana waxa ay Soomaalidu ku leedahay ganacsi balaaran inkastoo dhibaatooyin badan ay ku qabaan joogista dalka Kenya sida�.
1-dadka ka soo carara Dhibaatadda ka jirta Dalka Soomaaliya gaar ahaan Koonfurta Dalka Soomaaliya ee nabad galyadda u soo raadsada dalka Kenya gaar ahaan marka ay xuduudka soo galayaan aad ayaa loo dhibaateeyaa iyadoo lacago laaluush laga qaado iyo dhibaatooyin intaas ka badan, sida Xabsi iyo in dib loogu celiyo dhibaaadii ay ka soo carareen!
2-Dadka Soomaalida ah ku nool gudaha Caasimada dalka Kenya ee Nairobi gaar ahaan xaafaada Islii ee ay Soomaalidu ku badantahay waxaa ka dhaca dhibaatooyin ay askarta u geestaan dadka shacabka ah , waxaa laga qaadaa lacag baad ah, mararka qaar waxa ay kaa qaadanayaan wax walba oo jeebkaada ku jira sida lacag ama Mobile.
3-Dadka Dibaha ka yimaada ee dalka Kenya safarka ku yimaada marka ay baxayaan iyo marka ay yimaadaanba dalka Kenya Airpor-ka weyn ee Joma Kenyata ayaa lagu dhibaa waxaana laga qaataa lacago lagu sheegay in ay yihiin laaluush balse baad ah.
4-Qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xeryaha Qaxootiga ee dalka Kenya waxaa loo geestaa dhibaatooyin isku jira dil kufsi iyo dhibaatooyin kalle intaba.
Haddii dowladi jirto dhulkana uu nabad ah waxan oo dhibaato ah ma dhaceen balse nasiibdarada nagu dhacday ayay ka midtahay. Waana filayaa in maalin un Soomaalidu ay heli doonto dowlad iyo nabad.
Dacwadda dhulka Soomaalida way socotaa, wixii dheeraad ah ee dhulkaas dacwadiisa ku soo kordhana waan idiin soo gudbin doonaa.
Safaaradda Soomaalida ee Kenya Maxay Soomaalida u qabataa?
Inkastoo Dowlad Somaaliyeed oo xoog badan aysan jirin haddana Safaarada Somalida ee dalka Kenya waa saafaaradaha ugu shaqada badan safaaradaha ay Somalida ku leedahay dalka dibadiisa sababtuna waxay tahay dalka Kenya oo ah dal ay ku yaalaan xarumo ay daganyihiin safaarado iyo Heyado daneeya arrimaha Somalia.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay safaarada Somalida ee dalka Kenya ay qabatay waxa ka mid ah.
Soo dhaweenta iyo ka warqabka Madaxda Dowlada sida Madaxwayaha, Ra'iisul Wasaaraha, Wasiirka arrimaha dibada iyo mas'uuliyiinta la shaqeeyo Dowladda Soomaaliya.
Isku xirka safaaradda iyo Heyadaha, safaaradaha iyo shaqsiyaadka daneeya arrimaha Somalia. Gaar ahaan dadka Ajaanibta ah ee safaradda ku aadda dalka Soomaaliya ee la shaqeeya Heyadaha ama Dowladdaha daneeya Arrimaha Soomaaliya.
Fududeenta helida Baasaboorka Somaliga iyo wax u qabashada dadka dhibaatada kala kulma waaxda socdaalka ee dalka Kenya, sida dadka ay Police-ka dalka Kenya ku dhibaan Airport-ka iyo xuduudaha dalka Kenya.
La socodka iyo caawinta Burcad badeeda Somalida ee ku xiran xabsiyo ku yaala dalka Kenya gaar ahaan waxyaabah ay u qabataan waxaa ugu badan in ay soo booqdaan ama ay u diraan dad xaalkooda la socdaa balse dan badan lagama galo.
In ay dowlada Kenya safaarada kala hadashay sidii loo furi lahaa xuduudka dalka Kenya iyo in la helo xerooyin cusub oo ay dagaan dadka Somalia ka soo barakacaya oo haatan ay xerada Dhadhaab buux dhaaftay haatan.
Madaxda Safaarada Somalida waxay u is taageen sidii loo soo celin lahaa dhulkii hore ee Safaaradda Somalida ee dalka Kenya oo xaafada Westland ee magaalada ku yaal, waxaa la isla fuulay Maxkad iyadoo wali ay socoto maxkamadii waliba ay dacwadaasay wali socoto somaliduna rajo wanaagsan ayay ledahay.
Dhawaan sida ay sheegtay Maxkamada sare ee dalka Kenya waxaa mar kale dib loo dhigay dacwadii Safaaradda Soomaalida ilaa bisha December oo ah dhamaadka sannadkan 2010, Insha Allah wixii arrintaas ku soo kordha waan idinla soo socodiin doona, inkasta oo walaac laga muujiyey in dhulkaas la soo celiyo ilaa Soomaaliya ay ka dhalato dowlad dhaxe oo cagaheeda isku taagto.
Qoraalkii Safaaradda Soomaalida aan kaga hadlayay intaas ayaan ku soo dhameestiray wixii aan qaldayne ka raali ahaada.
ARAGTIDA DADWEYNAHA: Ra'yigaaga qoraalkan si toos ah uga dhiibo HALKAN
(FG. Fadlan jawaabta oo kooban ku qor dhanka hoose ee bogga soo baxa Marka aad RIIXDID HALKAN)
Qaybihii hore ka akhri halkan http://somalitalk.com/tag/safaarad/
Dukumiintiga la xiriira iibka safaaradda ka eeg HALKAN (magazine) ama halkan (pdf)
Faafin: SomaliTalk.com | November 15, 2010